Seal kushaikwa nharembozha: maitiro ekuzviita nhanho nhanho | Ehupfumi Zvemari
Nhasi tinorarama takanamatira kune nhare. Zvinoita sekunge, patakabuda, kana taive kumba, nharembozha yaive yave imwezve yekuwedzera muviri wedu. Uye zvechokwadi, izvo zvinoreva kuti zvese izvo zvataimboita nekombuta, kana kunyangwe tisina kana kuvimba netekinoroji, ikozvino tinopedzisira tave kuzviita nenhare. Semuenzaniso, isa chisimbiso pakumisa nharembozha, ita kuti utenge online kana kutobatidza kana kudzima mwenje.
Ichokwadi kuti kushandisa nharembozha, kana zvakajairika matekinoroji, kunodzivirira maitiro akareba ehurongwa (maawa ekumirira, kuumba magwaro, nezvimwewo) asi zvakare ine divi rayo rakaipa. Nekudaro, hazvimbokuvadza kuva nesarudzo dzinoverengeka; uye ndizvo zvatinowana panguva yekuisa chisimbiso kumisa nhare. Izvo hazvireve kuti pane chete iyo sarudzo, asi iwe unogona kuve akati wandei uye wosarudza iyo inonyatsokodzera iwe. Asi sei kuzviita pane nhare? Tinokutsanangurira iwe.
1 Kadhi rekushaya basa
2 Zvakanakira kusimbisa kushaikwa kwemabasa nenhare
3 Nhanho nhanho kusimbisa kumiswa ne mobile
4 Ko kana ndikakanganwa kuvhara stereki
Kadhi rekushaya basa
Kadhi rekushaya basa igwaro rinosimbisa kuti iwe wakanyoreswa semunhu anotsvaga basa muhofisi yebasa inoenderana newe. Mariri, yako data inounganidzwa, asi zvakare iro zuva rainofanira kuvandudzwa. Sei? Nekuti a nguva yemwedzi mitatu mumwedzi mitatu kutarisa kana mamiriro emushandi iyeye akwanisa kuchinja (semuenzaniso nekuti awana basa, nekuti ave kuzvishandira ...).
Sezvo nguva inopfuura, munhu iyeye anowana "hukuru" hunoshanda, pakati pezvimwe zvinhu, kukumbira rubatsiro kune avo vasinga shande kwenguva refu. Nekudaro, kuti uwane izvi, iwe unofanirwa kusimbisa stereki nguva zhinji, usingatombokukanganwa.
Zvakanakira kusimbisa kushaikwa kwemabasa nenhare
Pamberi, kuti usimbise kuramwa basa, waifanira kuenda kuhofisi uye unomirira mumutsara kuti vakuteerere uye vakuise chitambi. Zvino, zvese zvinokurumidza, kunyanya sezvo uine sarudzo dzinoverengeka kupasa sitiroko. Asi, imwe yeiyo iri kushandiswa zvakanyanya is chisimbiso chekumisa nharembozha.
Muchokwadi, zvinogona kuitwa nenzira mbiri dzakasiyana:
Kuburikidza neye mobile browser uye uchizviita sekunge iwe urikutsika paInternet.
Kuburikidza nebasa chairo.
Izvi zvine zvakawanda zvakanakira, senge:
Ichokwadi chekugona kusimbisa kumiswa nharembozha chero paunoda. Ehezve, pazuva chairo raunofanira kurishandisa, kwete zuva rakatangira kana zuva rakatevera. Asi une maawa makumi maviri nemana ekuti uzviite.
Kusafanira kuenda kune imwe nzvimbo kupasa stika. Unogona kuzviita kubva kumba kwako kana kubva chero kwaunenge uri nekuti uchazviita nefoni mbozha.
Hazvitore chero chinhu kuzviita. Muchokwadi, kunze kwekunge paine dambudziko rekubatanidza kana iyo peji kana application iri pasi, hazvitore anopfuura maminetsi mashanu kuti uzviite, uye unogona kukanganwa mushure mezvose.
Nhanho nhanho kusimbisa kumiswa ne mobile
Iye zvino zvaunenge uine zvishoma mamiriro, inguva yatakakupa iyo nhanho iwe dzaunoda kupedzisa kuti unyore mobile strike zvinobudirira. Iwe unofanirwa kuziva kuti, kuti ugone kuzviita, zvakakosha kuti uzokumbira zvisati zvaitika kuhofisi, kungave panguva imwechete iwe unonyoresa seanotsvaga basa kana chero nguva iwe uine nguva yekumira nehofisi uye maneja.
Uye ndezvekuti, kuti ukwanise kuwana mukana wekuvhara kushaya basa nenhare mbozha, zvimwe zvitupa zvinodiwa. Izvi zvinongova zita rekushandisa uye password, asi zvinofanirwa kupihwa iwe kuhofisi. Mune dzimwe nharaunda dzakazvimiririra vanobvumidza, kuburikidza nerunhare, kubata maitiro aya, asi hazvisi zvakajairika.
Unofanira kuzivawo izvozvo Nharaunda yega yega ine peji rewebhu kana nharembozha yekushandisa kuita chisimbiso chekushaya basa nenhare. Ivo vanofanirwa kukuzivisa iwe panguva iyo iwe yaunokumbira iwo magwaro, kwavanozokupa iwe iro peji kana iyo app yaunofanirwa kushandisa.
Nekudaro, iwe uchafanirwa chete ku:
Pinda iyo webhusaiti kana app iwe yaunoda kubva kune yako nhare.
Pinda zita rekushandisa uye password yawakapihwa.
Paunenge wapedza, iwe unenge uri muEmployment Portal yenharaunda yako yakazvimiririra uye pano, zvinoenderana neapp kana webhusaiti, uchafanirwa kutsvaga chikamu chinoshandira kumutsiridza kunyorera basa. Semuenzaniso, mune nyaya yeMadrid, izvi zvaizove mu «Mushandi» «Basa rekuda mabasa». Zvimwe zviri nyore uye zvine hungwaru sezvo, uchishandisa iyo app, ivo vanokutendera kuti ubaye panzvimbo kuti uvandudze kushaiwa basa pasina kuitsvaga.
Ko kana ndikakanganwa kuvhara stereki
Inogona kunge iri mamiriro ekuti iwe unokanganwa kusimbisa stereki. Kunyangwe iwe uine nzira dzakawanda dzekuzviita, hazvidziviririke kuti, nekuti iwe unofanirwa kuti unamate chete pamwedzi mitatu, uchatadza kuzviita, kunze kwekunge uchinyora pasi munzvimbo ine chokwadi chekuti uchazviona uye rangarira zuva nezuva.
Dambudziko nderekuti kana ukaikanganwa, uchave nenguva yakaoma kuzvipembedza, uye unokwanisa kutarisana nezvirango, kunyanya kana iwe uri kuunganidzawo rubatsiro rwekusashanda.
Kunyanya, zvinoenderana nemitemo yeSePE, zvirango zvauchatemerwa zvichave:
Kana iri kekutanga, uye urikutorawo rubatsiro rwekusashanda, iwe ucharasikirwa nemwedzi mumwe webhenefiti iyoyo. Kana iwe ukazvikanganwa iwe kechipiri, mune iyo kesi iwe ucharasikirwa nemwedzi mitatu yekubatsirwa. Kana chiri chechitatu, ucharangwa nemwedzi mitanhatu yekurasikirwa nebhenefiti. Uye kechina nguva, iwe ucharasikirwa nezvose zvaunazvo kutora kubva mukushaiwa basa.
Kana iwe ukatora iyo Inoshanda Yekuisa Imari, kana iwe ukasavandudza iro basa chikumbiro, iwe unobva warasikirwa neiyo rubatsiro.
Pane zviitiko zvishomanana chete umo iwe unogona kururamisa kunonoka kwekuvandudza kushaya mabasa, uye aya ndeaya:
Nekuda kwekurwara, sekureba sekunge iwe uine chitupa chezvekurapa zororo rinopembedza iro dambudziko.
Yezve ruzhinji basa, ndiko kuti, yekufanirwa kuenda kuruzhinji zviitiko, senge kutongwa (sedare redzimhosva).
Kana iwe uine kudzidziswa, ndokuti, makosi ekudzidzira. Kana iwo ari makosi anoitwa neSePE pachawo, munharaunda zhinji kunyorera kwako basa kwakamiswa, ndiko kuti, haufanire kuivandudza. Asi chenjera, nekuti haugone kuwana zvinopihwa zvebasa kana iko kudzidziswa kuchitora kunze kwekunge waenda chaizvo uye ndokumbira kunyoreswa zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Basa » Seal kumiswa nharembozha